Craps Maka Ọnụ | Oghere Free Twist - latabernasanlucar.com
Craps Maka Ọnụ | Oghere Free Twist
Craps pụrụ iyi ntakịrị ihe mgbagwoju anya. Egwuregwu egwuregwu that a nwere ọtụtụ okwu dị iche iche, nsogbu d e iwu ndị yiri ka ọ dị egwu. Dị ka onye mbido mgbe ị gara ileta okpokoro okpokoro, ị nwere ike inwe mgbagwoju anya website Id ị,ụrị ọ,ụ, ịsụ ude na iti mkpu nke okwu dị iche iche dịka”Yo iri na otu” ma na-eche”kedu ihe ọkụ mmụọ na-aga ebe acon”
Ọ bụrụ na ị na-enwe mgbagwoju anya banyere Craps, echegbula. Anyị na-aga demystify a iju egwuregwu n’ihi na ị. Ọbụna ndị nwere ọkpụkpọ egwuregwu kacha nwee ahụmahụ nọ n’ọnọdụ gị.
Ka ịmalitere ịgụpụta ntuziaka a t rigged maka dummies, ị ga-achọpụtan’oge na-adịghị anya t rigged adịghị mgbagwoju anya dịka ọ dị. O doro anya na ọtụtụ nhọrọ ịkụ nzọ na Craps nwere ike iyi ihe mgbagwoju anya, ịkwesighi itinye ebe ndị a niile.
N’ezie, ọtụtụ ndị egwuregwu nwere ahụmahụ na-arapara na nhọrọ ịkụ nzọ abụọ ma ọ bụ atọ mgbe ọ bịara na Craps.
Anyị ga-ekpuchi nke a t ọtụtụ ndị ọzọn’okpuru. Ya only, nọgidesie ike ma chọpụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Craps!
Nke a bụ ihe anyị ga-ekpuchi na ndu anyị maka otu esi egwu Craps d e mgbe ịmechara, ị ga-ebili ọtọ ma dịkwa njikere ịme nzọ mbụ gị na tebụl Craps dịn’ịntanetị:
Akụkọ ihe only eme nke crapsthe ntọala nke na-akpọ crapsthe ọtụtụ okwu na-eji na gamethe ichen’etiti akpọ craps online vs. t a ala dabeere casinowhere igwu craps na cha cha bonus bonus onye na-eme atụmatụ aghụghọ Craps na ọtụtụ echiche na-ezighị ezi
Mgbe ị gụchara akwụkwọ ntuziaka a, ọ bụghị naanị na ị mụtara ka esi egwu egwu kamakwa otu ị ga – esi bulie ohere ị merie mgbe ị na – egwu craps.
Akụkọ Craps: Olee otu egwuregwu ahụ si malite?
Dabere na Wikipedia Craps bụ nsụgharị gbanwere ụdị egwuregwu ochie Britain nke akpọrọ Hazard. Mgbe anyị kwuru, “ochie”, anyị na-ekwu n’ezie ochie, dị ka na-abanye na oge nke Crusades.
E webatara ihe ize ndụ t America t 1805 t Louisiana.
Ihe ize ndụ bụ egwuregwu dị mgbagwoju anya ma kwere na ya ma ọ bụ d e ọ bụghị, Craps bụ ụdị dị mfe nke Hazard. Craps ghọrọ onye a ma ama n’etiti ndị agha na agha ụwa nke abụọ mgbe ndị agha na-egwu ụdị n’okporo ámá ya.
Mgbe agha ụwa nke abụọ gasịrị, casinos dị na Las Vegas t Carribean nwere nnukwu agụụ maka ndị agha a na-alọghachite na tebụl Craps bidoro ịpụta na United States.
N’afọ ndị 1960, casinos ole na ole t Europe malitere imeghe tebụl Craps ma ewu ewu nke Craps malitere na mmalite nke ịgba chaa chaan’ịntanetị na 2004. Kemgbe ahụ Craps amụbawo na mgbasa ozi n’ụwa niile.
Etu ị ga – esi egwu Craps na ntanetị::kpụrụ Nzuzo nke Craps
Egwuregwu nke Craps na-agbaso usoro ihe omume.
Otu n’ime ndị egwuregwu ahụ na-eme dị ka onye na-atụba ya. Onye a bụ onye na-ere ahịa mgbe that a na-akpọ Craps na cha cha cha cha. A na-akpọ onye that a na-atụba ọda ahụ onye agba egbe.
Onye na-agba ụta ahụ miniature debe akara gburugburu na tebụl Craps nke nwere akụkụ 2.
Akụkụ nke mbụ nwere ndabere ọcha ma dee”na” un t akụkụ nke ọzọ nke ahịa ahụ nwere ndabere ojii ma dee”apụ” t be.
Onye na-agba ụta na-etinye akara ngosi gburugburu yana akụkụ “apụ” na-eche ndị egwuregwu ahụ. Nke a pụtara na ndị egwuregwu nwere ike ịbe ha ugbu a.
Ndị egwuregwu niile na-etinye nzọ d e ma ọ bụ”akara ngafe” ma ọ bụ”ịgabigala”.
Ozugbo ndị egwuregwu niile debere nzọ ha, onye na-agba ụta na-ewere akara ahụ miniature tụgharịa ya ka ndị egwuregwu ahụ hụn’akụkụ”n’akụkụ”. Nke a pụtara na egwuregwu dị na tebụl agaghị anabata ndị egwuregwu ọ bụla.
Onye na-agba ụja miniature wụsa ọfụma ahụ. N’ọtụtụ casinos n’ịntanetị, onye na-agbapụ anaghị atụba onwe ya. Onye na-agba ụta na-ebu ibu ahụ na igwe nke na-atụba ya. Lido ga-akụ mgbidi nke akụkụ ahụ na-abụghị nke tebụl. Ọ bụrụ na otu ma ọ bụ ha abụọ adapụ d e tebụl ma ọ bụ ha abụọ agaghị adan’akụkụ nke ọzọ na tebụl ahụ, a ga-atụgharị ugboro ugboro.
Ọ bụrụ na onye na-agba egbe adaa 7 ma ọ bụ 11, ị meriri nzọ ahụ ma ọ bụrụ d e ị gaferen’ahịrị na-aga ma ị ga-efunahụ ma ọ bụrụ d e ị na-akụ na akara gafere.
Ọ bụrụ na onye na-agba egbe ahụ adaa 2,3 ma ọ bụ 12, ị ga – eferi nzọ ahụ ma ọ bụrụ na ị zọọ na njem gafere ma merie nzọ ahụ ma ọ bụrụ na ị gafere na akara nkwụsị ahụ.
Onye na-agba ụta na-agan’ihu na-atụpụ un ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị a na-abịa.
Ọ bụrụ na onye na-agba egbe nwetara 4,5,6,8,9 ma ọ bụ 10 ọnụọgụ nke ọ tụgharịrị bụrụ ihe a na-akpọ”isi”. Ọ na – eburu akara ahụ, tinye akara ahụn’akụkụ un t – eche ihu na isi.
Mgbe e debere isi, ị ga-enwe ohere itinye ihe a na-akpọ ihe efu efu na-akwado nzọ n’azụ. Anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. Ugbu a, ọ bụrụ na onye na-agbapụ agbapụ otu ọnụ ọgụgụ dị ka isi, a na-akwụ gị ụgwọ na ịkụ nzọ na akara nkwụsị na nzọ efu efu. Ọ bụrụ na onye na-agba agba ahụ na-agbanye 7, ị ga-efu ma nzọ.
Mgbe emechara isi okwu a, ịnwekwara ike itinye ihe a na-akpọ bets.ihe ndị a bụ nzọ ma onye gbara agba ahụ ga-agbanye 4,5,6,8 ma ọ bụ 9 ma ọ bụ 10.
I nwekwara ike igbasa ihe that a na-akpọ Ebe Bets. Ndị a bụ nzọ ma onye na-agba ụta ahụ ga-agbanye 5, 5, 8, 6, 9 ma ọ bụ 10 mgbe emechara Point ahụ, yana tupu ịmalite 7.
Ọ bụrụ na onye na-agbapụ agbapụta nọmba ị ga-agba na ya, ị ga-akwụ ụgwọ na nzọ ahụ. Onye na-agba egbe miniature na-agbagharị ọpụpụ ahụ ruo mgbe ọ batara 7. Mgbe onye na-agba ụta na-etufu 7, ị ga-efunahụ ebe ị na-akụ yana ụzọ nkwụnye self gị na nkwụnye self love efu.
A na-ekpochapu okpokoro Craps ma nye un onye ọhụụ ọhụrụ. Mgbe ị na-egwu egwu online Crap the shooter ka dị otu ọ gaghị ekwe omume maka ndị egwuregwu ka ha tụfuo anụ ahụ mgbe ha na-egwu egwu n’ịntanetị.
Ka nwere ike inwe ntakịrị mgbagwoju anya mgbe ị gụsịrị nke a ma ọ bụrụ na ịkpọtụbeghị Craps na mbụ. Ma tụkwasa anyị obi, anyị ga na-agwa gị ebe ị nwere ike igwu craps online n’efu ka ị nwee ike ịme ụfọdụ omume.
Nsogbu Craps, Atụmatụ na atụmatụ
Nke a nwere ike ịdị ka ọ dị ịtụnanya mana Craps bụ egwuregwu nwere ike ịdị mfe ma ọ bụ gbagwojuru anya ịchọrọ ịme ya. Dịka anyị kwuburu na mbụ, ị nwere ike igwu Craps n’etinyeghị nhọrọ ịkụ nzọ dị mgbagwoju anya n’ebe ahụ.
N’akụkụ that a anyị ga-ekwu maka otu ị ga – esi kpọọ Crapsn’ụzọ kwụ ọtọ.
Nke a bụ otu ị si eme ya.
Na – amalite websiten’itinye nzọ akara ngafe ma ozugbo isi okwu ahụ guzobere, ị na – eme ihe a t – akpọ”ọghọm nzọ”.
Oddszọ nzọ ga-abụ nzọ ị ga – ga edoben’azụ ụzọ ngafe gịn’elu tebụl. Payoutgwọ maka nzọ that a bụ 1x ma ọ bụ otu self service ahụ nzọ gị (dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị zọọ $10 ị merie $10 ọzọ).
Typedị Craps nzọ that a amachaghị nke ọma. Enweghị akara na tebụl Craps maka nzo ndị a ka ị mara banyere ụdị nzọ a tupu etinye ya.
Enwere ọtụtụ nzo craps ndị ọzọ ị nwere ike ịme manan’oge a dị ka onye mbido ị maara banyere ndị kachasị mkpa.
Ntughari ngwa-ngwa nke Craps Terminology
Okpokoro craps bụ ngalaba kachasị ndụ na cha cha. Ọ bụrụ na ị na-egwu blackjack, Pai Gow ma ọ bụ Poker Card atọ, ma nụ ka ndị mmadụ na-eti mkpu ma na-akụ aka, ị nwere ike ịkụ nzọ na-abịa website Id tebụl craps.
Mgbe ị garuru tebụl ahụ, ị ​​ga-anụ ka ndị mmadụ na-akpọ ihe ndị na – enweghị isi (opekata mpe ndị newcomer ). Craps nwere asụsụ nke ya. Ọ bụ otu n’ime ihe kpatara ọhụụ ọhụụ na-atụ ụjọ.
N’okpuru, ị ga – ahụ okwu a t – ahụkarị na tebụl craps, yana ihe ha pụtara. Burun’uche, ịkwesighi ịsụ asụsụ ahụ have been . Kwesịrị ịmara nkebi ahịrịokwu ndị a.
Asaa ọ bụla – nzọ itinyere ma mpịakọta ọzọ bụ 7.
Nnukwu 6 Nnukwu 8 – nzọ that a tinye na ma ọ bụ 6 ma ọ bụ 8 ka akpọre tupu 7.
Bịanụ Bet – dị ka Bet Line, ma ọ bụ mgbe mpịakọta ga-apụta.
Pụta mpịakọta – mpịakọta nke mbụ nke onye na-agba agba mere.
Nsogbu na-adịghị mma – nzọ that a ga-etinyen’azụ gị Pass Line Bet mgbe emechara Point ahụ. Ọ bụ nzọ kacha mma t rigged.
Gaa Line Bet – nzọ edobere tupu mpịakọta pịpụta.
Stage – 5, 4, 8, 6, 9, ma ọ bụ 10 akpọrepun’oge mpịakọta Outside.
Ugboro asaa – onye na-agba ụta na-apụta 7, si otú a na-agwụ gburugburu.
Anya agwọ – ụzọ abụọ (1s).
Yo – nọmba 11.
Ozo, enwere otutu okwu ndi ozo eji eme ihe t rigged. Ma ọ bụrụ na ị jiri nkebi ahịrịokwu 10 dịn’elu mara onwe gị, ị ga-ama ihe ịchọrọ iji miniature jiri obi ike na-egwu egwuregwu ahụ.
Egwuru egwu Craps Online vs. Casinos nke Ala
Nwere ike igwu craps ma online t a ala dabeere cha cha. Nanị ihe dị iche iche ga – abụn’eziokwu na na cha cha chara chaa chaa ala ị ga – enwe ohere ịhụ ndị egwuregwu ndị ọzọ miniature wụsa ọfụma ma bụrụ onye na – agbapụ onwe gị.
7 Uru Playgba Egwu
Kpọ craps online na-abịa na ụfọdụ jụụ uru t I nwere ike inwe dị ka a mbido tụnyere egwuregwu craps t a ala dabeere cha cha.
Kwesighi ịga ụlọ cha cha ọdịnala
Gba chaa chaa nwere ike ịbụ ihe iwu na-akwadoghị na obodo gị ma ị nwere ike ịgafe ókèala, ịgbazite ụlọ nkwari akụ ma mefuo self na tiketi ụgbọ elu, ihe a niile nwere ike belata oke oke uru gị ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọn’abalị mgbe ị na-egwu craps.
Nwere ike igwu egwu na ike gị karịa ịnwa iso ndị na-ere ahịa
Nke ahụ bara oke uru ma ọ bụrụ na ị na-amụ ụdọ ma chọọ oge iji chọta ụda gị.
Nwere ike igwu egwu oge ọ bụla ịchọrọ website Id nkasi obi nke ụlọ gị
N’adịghị ka igwu egwu na casinos dị na ala ebe ị ga-eji oge t self na-eme njem ma nwee mmetụta iji ụgwọ oge na tebụl naanịn’ihi na ị gara nsogbu nke ịbịaru ebe ahụ, ị ​​nwere ike igwu crapsn’ịntanetị na nkasi obi nke ụlọ gịn’oge ọ bụla ụbọchị na oge ọ bụlan’izu!
Gaghị echegbu onwe gị maka ịmehie ihe
Mgbe ị na-akpọ craps na cha cha charan’ịntanetị, a na-ahụ iwu ndị ahụ nke ọma ma sistemụ ahụ na – egbochi gị ịmehie ma mee ka ọ dịrị gị mfe itinye nzo gị.
Ikwesighi ikwuputa onye na-ere ahia
Ọ bụ ihe that a na-ahụkarị na casinos iji kpuchie onye na-ere gị ahịa mana mgbe ị na-egwu crapsn’ịntanetị ị gaghị eme ya. Nke a na-enyere gị aka ịchekwa self indulgent.
Nwere ike igwu craps online dị ka obere ka $ 0,50.
Ọtụtụ casinos ndị dị na warara dị na Las Vegas nwere nzọ dịkarịa ala nke $ 5. Nke ahụ nwere ike ọ gaghị ada ka obere self service mana ọ ga-eju gị anya etu self love ga-esi laan’iyin’abalị mgbe nzọ opekata mpe bụ $ 5.
Na ntanetị casinosn’ịntanetị, ọtụtụ tebụl Craps nwere opekempe ịbụ naanị $ 0.50.
Nwere ike ịnweta self cha cha maka Craps na casinosn’ịntanetị
Na ntanetị ịntanetị ị nwere ike ịnweta self service cha cha nke na-ewetara gị otu self ahụ ị debere. Dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị kpebie ijide self nke 100 percent ruru $500 ma tinye $500, cha cha na-enye gị self service nke $500!
Nke a agaghị ekwe omume n’ọtụtụ ụlọ casinos nwere isi.
Egwuru egwu Craps n’ịntanetị nwere adịghị ike ọ bụ ezie . .
Nke mbu, igaghi enwe ike inwe obi uto nke ndi mmadu mgbe onye na-agba egbe gha agha. (N’ezie, ị gaghị anagide ịsụ ude that a na-apụghị izere ezere mgbe onye na-agbapụ na-agbanye 7.
Nke abuo, ị gaghị enwe ike ịnata mmeri gị ozugbo. Enjoy ga-arịọ nkwụsị na ebe nrụọrụ weebụ ịgba chaa chaa. A ga-ezitere gị ego gị n’ụdị nlele.
Abụọ ndọghachi azụ abụọ ahụ bụ obere self service ịkwụ ụgwọ nyere uru dịn’ịgba crapsn’ụlọ.
Casinos kachasị mma igwu egwu Craps na ntanetị t self cha cha
Anyị edepụtara 5 casinosn’okpuru ebe ị nwere ike igwu Craps t self cha cha:
3 Uru Playgba Egwuregwu Toto Site na Ntanetị Ntanetị – Blog Online Blog
Kporie Egwuregwu na Nkasi Obi nke Ebe Favụ Gị